Hot Rolled 1100 Grade Aluminum Circle Blanks Spinning For Lighting Decoration - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Shuanglin Jiate dia mpamokatra lehibe sy mpamatsy ny alim-pitaratra aluminium miorina ao amin'ny China Alloy: 1000series, 3000series. Aluminium Pure Aluminium, toa ny Alloy 1050, 1060, 1070, 1100 ary Alloy Aluminum Circle, toy ny Alloy 3003. Samy azo ampiasaina amin'ny alimo ny fofona maintin'ny alika sy tsy hafanana
Iray amin'ireo mpamokatra haingam-pitaovan'ny alim-pototra indrindra any amin'ny faritra afovoan'i Sina isika, ary namorona ny kodiaran'ny alim-bary tamin'ny 5years isika, ny hatsaran-tarehintsika dia mety ho tsara ho an'ny horonam-peo lalina sy ny famoahana ny fampiasana azy. Mirehareha isika amin'ny faribolan'ny aluminium misy antsika, ny kalitao hitarika ny hoavy. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra karazan-damba maro samihafa. Amin'ny maha-mpanamboatra antsika, afaka manome entana avo lenta sy ambany vidiny isika.
MOQ: 0.20 metatra isan-taona, 5 metric taonina isaky ny filaminana
Ny vavahady sy ny famantarana an-dalambe
Famantarana ho an'ny parking lot
Famantarana ho an'ny orinasa sy orinasa madinika
Fananganana fananganana sy fitarihana
3003 h14 kofehy aliminioma, Fonosana Aluminium Deep, kodiarana alim-borona mafana